बाढीपीडितका लागि माडीमा सुरक्षित भवन – |Radio Burtiwan| burtibang khabar
बाढीपीडितका लागि माडीमा सुरक्षित भवन
६ चैत्र २०७५, बुधबार ०५:३२ March 20, 2019 manak	0 Comments
माडी,२ जेठ ।चितवनको अन्य ठाउँको तुलनामा माडी उपत्यका बाढीबाट धेरै प्रभावित हुन्छ । यहाँ रहेका दर्जनौं खहरे खोला वर्षायाममा माडीबासीका लागि अभिशाप बन्ने गरेको छ ।
सानो पानी पर्दा पनि यहाँका खहरेमा भेल उर्लन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर खोला किनारका स्थानीयमा पर्दै आएको छ । बाढीबाट प्रभावित हुने माडी नगरपालिकाको पनि सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र धोवाहा हो । धोवाहा नजिक बाँदरमुडे र रिउ खोला पर्छ । सानो पानी पर्दासमेत बाँदरमुडे खोला बस्ती पस्न थाल्छ । केही दिनअघि परेको पानीका कारण सो खोला बढेर करिब–करिव बस्तीमै पस्ने अवस्थामा थियो । यस्तै अवस्थाका कारण बाढीबाट सुरक्षित रहनका लागि माडी नगरपालिका–३, धोवाहामा प्रकोप राहत केन्द्र भवन निर्माण गरिदै छ ।
नेपाल सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल), माडी नगरपालिका, बघौडा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सहयोगमा धोवाहामा सुरक्षित भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको १ कठ्ठा जग्गामा तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालको रु ५० लाख र बघौडा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको रु. ३ लाख ५६ हजार सहयोगमा दुई तल्ले भवन निर्माण भइरहेको तालका कार्यक्रम संयोजक प्रेम पौडेलले बताए ।
बाढीसँगै जनावरको आक्रमणबाट बच्नका लागि पनि सो भवनको प्रयोग गर्न पाइनेछ । “बाढीका कारण यहाँका स्थानीय सधैं प्रभावित भइरहेका छन्”, तालका कार्यक्रम संयोजक पौडेलले भने, “तत्काल सुरक्षित रहन र उद्धारपछि राख्नका लागि विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा भवन निर्माण गरिदैछ ।” उनका अनुसार तत्काल उद्धार गर्न नसक्नेहरुलाई सो भवनमा प्राथमिकता दिइनेछ । बाढीकै कारण सो बस्तीबाट यसअघि हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गरेर उद्धार गरिएको उदाहरण छन् ।
महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राख्ने व्यवस्थासहित बनाइएको सो भवनमा करिब ५ सयभन्दा बढी बस्न सक्ने तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालका सामुदायिक संरक्षण सहजकर्ता वेदहरि दाहालले बताए । धोवाहामै करिब ५ वर्षअघि जलवायु परिवर्तन अग्रीम सूचना तथा सुरक्षित टावर निर्माण गरिएको थियो । सोही टावरकै कारण यस क्षेत्रका स्थानीय बाढी आएका बेला त्यही भवनमा सुरक्षितरुपमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।
स्थानीय बिक्रम महतो सो टावरका कारण यहाँ मानिसहरुले सुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताए । “वर्षाको बेला ढुक्क भएर सुत्ने अवस्था छैन” महतोले भने, “सो टावरका कारण केही भएपनि राहत महसुस गरेका छौं ।” महतोका अनुसार वर्षमा ३–४ पटकसम्म यहाँ बाढीले प्रभावित बनाउँदै आएको छ । तराई भूपरिधि कार्यक्रमको रु २ लाख ३० हजार, बघौडा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको रु १ लाख ९३ हजार,आर.आर.एनको रु १ लाख सहयोग तथा जनश्रमदानबाट सो टावर निर्माण गरिएको थियो ।
← प्रदेश ३ को राजधानी चितवन !
जुम्लामा अझै पाठ्यपुस्तक पुगेन, शिक्षक–विद्यार्थीमा अन्योल →
निसिखोलाका कृषकहरुलाई व्यवसायिक बाख्रापालन सम्बन्धि भेटिनरी तालिम आज देखि सुरु ।। ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०५:३२
नगरप्रमूख नेपाली सहितको टोलीद्धारा बुर्तिबाङका ३ ओटै परिक्षा केन्द्रको अनुगमन । ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०५:३२
अर्गानिक खेती प्रणालीले साह परिवार माडीकै नमुना किसान ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०५:३२
गुञ्जा राय, “कालो दिवस”को समाचार शेयर गरेपछि जागिर चट, के भन्छिन् उनी ? ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०५:३२
पानीजहाज आउँदैछ, बबण्डर गर्नेबेला भएको छैनः देवेन्द्र पौडेल ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०५:३२